ဝတ္တုတို – စာအုပ်မြို့တော်
“မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကကို ငွေတစ်ရာနဲ့စတင်ခဲ့သူ “
လန်ဒန်အတ်ဦးအုန်းမောင် ယနေ့ရုပ်ရှင်လောကကို တချိန်က ငွေတစ်ရာနဲ့ စခဲ့ရတယ်ဆိုရင် ယုံချင်မှယုံကြမှာပါ။ တကယ်ပဲ ငွေတစ်ရာနဲ့ စခဲ့ရတာပါ။ စတင်သူကတော့ မြန်မာပီမီသျှောင်ထုံးအမြဲ ထုံးထားတတ်သူ လန်ဒန်အတ်ဦးအုန်းမောင် ဖြစ်သည်။ ဦးအုန်းမောင်သည် သျှောင်ထုံးကြီးနှင့် ဖြစ်သော်လည်း အင်္ဂလိပ်စာတတ်သူ ၊ ပန်းချီ နှင့် ဓာတ်ပုံ အနုပညာကို ဝါသနာပါသူ ဖြစ်သည်။ ဒီ ၊ အေ ၊ အဟူဂျာ ဓာတ်ပုံတိုက်တွင် လခစားဓာတ်ပုံဆရာလုပ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ယင်းသို့လုပ်ကိုင်ရာမှ တစ်နေ့တွင် ဦးအုန်းမောင်သည် လခစားဓာတ်ပုံဆရာဘဝကို စွန့်လွှတ်လိုက်သည်။ ယောက်ဖဖြစ်သူ ဓာတ်ပုံဆရာဦးမောင်မောင် နှင့် တွဲကာ “လန်ဒန်အတ် ဓာတ်ပုံကူး တိုက်” ကိုတည်ထောင်လိုက်သည်။ ဓာတ်ပုံလုပ်ငန်းအဝ၀ကို စိတ်တိုင်းကျဆောင်ရွက်သည်။ ဦးအုန်းမောင်သည် ဓာတ်ပုံပညာကျွမ်းကျင် သည့်အပြင် လုံ့လဝီရိယရှိသူ ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းသူ လည်းဖြစ်တာကြောင့် သူ့လုပ်ငန်းသည် […]
Posted in: ၀တ္တုတိုLeaveacommentMM Book City	 23/07/2018
ထိုင်ဝမ်မှာ အမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦးရှိပါတယ်။ သူဟာ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်ကောင်းတုန်းမှာပဲ ယောက်ျားဆုံးပါးသွားပါတယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့ သားလေးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ သားလေးကို ဘထွေးနဲ့ မကြုံစေချင်လို့ နောင်အိမ်ထောင်ထပ်မပြုပဲ အမေတစ်ခု သားတစ်ခုနဲ့ ပဲ သားလေးကို ပျိုးထောင်လာခဲ့ပါတယ်။ သားလေးလည်း အလွန်လိမ္မာပါတယ်။ အမေ့ကိုလည်း အလွန်သိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆရာမ၀င်ငွေငွေလေးနဲ့ သားလေးကို ရှိစုမဲ့စု ပျိုးထောင်လာခဲ့ပါတယ်။သားကလည်း ထူးချွန်တာမို့ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ပညာတော်သင် စေလွတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကမှာ သားကလည်း ထူးချွန်ပါတယ်။ ကျောင်းပြီးလို့ အလုပ်ကောင်းပြီး အမေရိကမှာပဲ အိမ်ထောင်ပြုပြီး ကိုယ်ပိုင်အိမ်တစ်လုံး ၀ယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြေးကလေးတစ်ယောက် ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူ ဆရာမကတော့ တာဝန်နဲ့မို့ ဆရာမအဖြစ်ပဲ ထိုင်ဝမ်မှာ ဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလုိုနဲ့ ဆရာမကြီးဟာ ပင်စင်ယူချိန်နီးလာပါတော့တယ်။ပင်စင်ယူချိန်နီးလာလေလေ သားနဲ့ မြေးလေးကို သတိရလေလေဖြစ်ပြီး […]
Posted in: ၀တ္တုတိုLeaveacommentMM Book City	 06/07/2018
“မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အားရင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပဲ ထိုင်နေကြတာပဲ”ဆိုသောစကားကို မကြာခဏ ကြားရသည်။ နိုင်ငံခြားသားတွေက ပြောခြင်းတော့မဟုတ်။ မြန်မာအချင်းချင်းက ပြန်ပြောခြင်းသာဖြစ်၏။ အထူးသဖြင့် အလုပ်နှင့် လက်မပြတ်အောင် လုပ်ရင်း တိုးတက်ကြီးပွားဖို့ အမြဲကြံစည်နေသူများနှင့် နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်သွားလုပ်ဖူးသူတချို့က ပြောကြခြင်းဖြစ်၏။နိုင်ငံခြားသားတွေကတော့ မြန်မာများ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ကြခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချတာမျိုး သိပ်မရှိလှဘူး ထင်၏။ ရှိချင်းရှိလျှင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အေးအေးဆေးဆေးထိုင်နိုင်လောက်အောင် အချိန်တွေချမ်းသာနေသော မြန်မာတွေကို အားကျခြင်း၊ မနာလိုခြင်းတို့သာ ဖြစ်နိုင်ဖို့များသည်။ သူတို့ခမျာ တစ်နေကုန် မနားမနေ အလုပ်လုပ်နေကြရှာတာမဟုတ်လား။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ခြင်းအလေ့အထသည် နိုင်ငံခြားယဉ်ကျေးမှုမှ ကူးစက်လာခြင်းဟု အတိအကျ စွပ်စွဲလို့မရ။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုစစ်စစ်ရယ်လို့လည်း အခိုင်အမာမပြောနိုင်။ ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုတော့ရှိသည်ဟု ဆိုကောင်းဆိုနိုင်သည်။ရှေးအစဉ်အဆက်ကတည်းက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ခြင်းနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူသော အလေ့အထတစ်ခုရှိခဲ့၏။ တောရွာများတွင် အိမ်ရှေ့တွေမှာ ကွပ်ပျစ်ကြီးတွေ ထားတတ်သည်။ ညဘက် လသာချိန်ကျလျှင် လူကြီးပိုင်း၊ လူလတ်ပိုင်းတို့သည် […]
Posted in: ၀တ္တုတိုLeaveacommentMM Book City	 21/06/2018
“ဒီအရက်ဟာ မကောင်းပါဘူးကွာ” ဟု သူက ရေရွတ် လိုက်သည်။ ထိုအခါ ဆိုင်ရှင်ကြားသွားပြီး “ဒီအရက်ဟာ ဆိုင်က ထုတ်ပေးတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာ။ ကျွန်တော်က ဘယ်တော့မှ အကြံအဖန် မလုပ်တတ်ဘူး ဆိုတာ အစ်ကိုကြီးသိပါတယ်။ အမြဲသောက်နေကျပဲ မဟုတ်လား” သူက “ဟာ.. ဟာ” ဆိုလုပ်၍ လက်ကာပြသည်။ “ခင်ဗျား ဆိုင်အရက်ကို မကောင်းဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ အရက်ဟာ ကျုပ်ကို ကောင်းကျိုးမပေးဘူးလို့ ပြောတာပါ”“ကောင်းကျိုးမပေးရင် မသောက်နဲ့ဗျာ” ဟူ၍တော့ ပိုင်ရှင်ကဖြင့် ပြောလို့ မဖြစ်ချေ။ အရက်ရောင်းနေသူ တစ်ယောက်က အရက်ဆန့်ကျင်ရေး စကားကို ပြောနေလျှင် “မိမိရောင်းကုန်ပစ္စည်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေသော စကားမျိုး မပြောမိပါစေနှင့်” ဆိုသော ခေတ်သစ်ရောင်းဝယ်ရေးဗျူဟာ သဘောတရားကို ဖောက်ဖျက်ရာကျမည် မဟုတ်လား။ ထို့ကြောင့် ဘာမှ ထပ်မပြောဘဲ […]
Posted in: ၀တ္တုတိုLeaveacommentMM Book City	 15/06/2018
တစ်အိမ်လုံးမှာ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရှိကြောင်းကို ပြားကစ၍ အတိအကျသိရသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိပြီဖြစ်၏။ ကလေးတွေကို သူတို့အမေက မုန့်ဖိုး တစ်ယောက်တစ်မတ်စီ ပေးသည်။ ခါတိုင်း သုံးဆယ့်ငါးပြား ပေးနေကျ ဖြစ်သဖြင့် ကလေးတွေက မကျေနပ်ကြ။ ဘာမျှတော့ မပြောချေ။ ပြောလို့လည်း ဘာမှမထူး၊ ပိုရမည်မဟုတ်မှန်း သိသောကြောင့် လေကုန်ခံပြီး မပြောကြခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့တည်းမဟုတ် သူတို့အမေ စိတ်ထွက်ပြီး ခေါင်းခေါက်မည် စိုးသောကြောင့်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မည်။ အငယ်ဆုံးကောင်ကတော့ ပိုက်ဆံတစ်မတ်စီကိုင်၍ လှည့်အထွက်တွင်.. “နည်းနည်းလေး ပေးတာ မလောက်လို့.. များများကြီး ပေးပါဦးလို့” ဟု သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖျက်ပြီး မကြားတကြား ဆိုသွားသည်။ လက်ကျန်ငွေမှာ ငါးကျပ်တန်တစ်ရွက်၊ ကျပ်တန်နှစ်ရွက်၊ ကျပ်ပြားတစ်စေ့၊ ငါးမူးစေ့ (အပေါ့) တစ်စေ့၊ ငါးပြားစေ့က အတွန့်ပါတာ […]
၁ ။ မြစ်ကြီးလည်း မခမ်းစေနဲ့ ၂ ။ သစ်ပင်ကြီးလည်း မလဲစေနဲ့ ၃ ။ ထုံးအိုးကြီးလည်း မကွဲစေနဲ့ ကြားတော့ ကြားဖူး၏ သို့သော် …. တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် သိသူတော့ ရှား၏ ( ၁ ) မြစ်ကြီးလည်း မခမ်းစေနဲ့ ================= မြစ်ကြီးလည်း မခမ်းပါစေနဲ့ ဆိုတာ ကြည်လင် အေးမြတဲ့ တသွင်သွင်စီဆင်းနေတဲ့ မြစ်ကြီးနဲ့ တူတဲ့ မေတ္တာတရားများ လူသားတွေမှာ မခမ်း ခြောက်ပါစေနဲ့ .. လို့. ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏ ၊ လူသား အချင်းချင်း ဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟအချင်း ချင်း မေတ္တာထားပြီး နေထိုင်ကြမယ် .. အားလုံးသော သတ္တဝါအနန္တ အပေါ်မှာလည်း မေတ္တာစမ်းရေများ မခမ်းခြောက်အောင် […]
Posted in: ၀တ္တုတိုLeaveacommentMM Book City	 14/05/2018
” ခြင်္သေ့စိတ်ဓါတ်နဲ့ Plan-B”
ဒီမေးခွန်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်တော်တော်များများရဲ့ ရင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ။ ‘ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာဝါသနာပါမှန်း မသိတဲ့ လူငယ်တွေ၊ သိလည်း ကိုယ့်ဝါသနာကို အကောင်အထည်ဖော်လို့ မရတဲ့ လူငယ်တွေ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ’ တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ မိဘတွေရဲ့ အုပ်ထိန်းမှု၊ ကျောင်းက ဆရာဆရာမတွေရဲ့ လမ်းညွှန်မှုဟာ ဘယ်ကိုပဲ အဓိကဦးတည်လဲဆိုရင် စာမေးပွဲမှာ အမှတ်များဖို့နဲ့ ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အခါ တက္ကသိုလ်ကောင်းကောင်းတက်ရဖို့ပါပဲ။ ကလေး ဘာဝါသနာပါတယ်ဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ဖို့ အားမပေးတတ်ကြဘူး။ အဲဒီအပြင် ပိတ်ပင်ခံရတာတွေတောင် ရှိပါတယ်။ ဒီအရွယ်မှာ အပြင်စာတွေမဖတ်နဲ့၊ ဘောလုံးချည်းပဲ ကန်နေတာပဲ၊ စသဖြင့် ကျောင်းစာမှာ အမှတ်နည်းမှာစိုးတာကြောင့် ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပညာရေးစနစ်ကလည်း ဒီလိုဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးထားတာကိုး။ အဲဒီရဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ လူငယ်တွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာဝါသနာပါမှန်း […]
Posted in: ၀တ္တုတိုLeaveacommentMM Book City	 13/05/2018
Posted in: ၀တ္တုတိုLeaveacommentbloggerak	 27/04/2018
နရသူမင်း နှင့် ဓမ္မရံကြီးဘုရား
နရသူဟု ဆိုလိုက်လျှင် သူရဲ့နာမည်နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ကုလားကျမင်း ကိုပြောမှန်း အားလုံးသိကြမှာပါ။ သူဟာ မြန်မာ့သမိုင်းတလျှောက် အဆိုးဝါးဆုံးမင်းတွေထဲက တစ်ပါးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထီးနန်းစည်းစိမ်ကို မြန်မြန်အလိုရှိတာကြောင့် နာမကျန်းဖြစ်နေသော ခမည်းတော်အလောင်းစည်သူမင်းကြီးအား မြန်မြန်ကွယ်လွန်စေချင်သည့်အတွက် နန်းတွင်းတွင်မထားပဲ အခြွေအရံ အပြုအစုကင်းမဲ့သော ရွှေဂူကြီးဘုရားသို့ ပို့ထားလိုက်ပါတယ်။ ခမည်းတော်ကြီး သတိမေ့လျော့နေရာမှ သတိပြန်ရလာသည်ဟု ကြားတဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်သွားပြီး အဝင်ဖြင့် ပါးစပ်ကိုဆို့ကာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ အလောင်းစည်သူမင်းကြီး နတ်ရွာစံကြောင်း သားတော်ကြီး ဖြစ်သူ မင်းရှင်စော ကြားတဲ့အခါ အခုခေတ် မန္တလေးနယ်ဘက်ကနေ စစ်တပ်နဲ့ ပုဂံကိုချီတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို နရသူကြားတော့ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း နောင်တော်လို အရည်အချင်းမရှိတော့ ခံတိုက်ဖို့ မလွယ်တဲ့အပြင် တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်း မင်းရှင်စောကိုသာ ချစ်ခင်ကြတဲ့အတွက် အကောက်ကြံပါတော့တယ်။ သာသနာပိုင်ဖြစ်တဲ့ ပံသကူမထေရ် ကိုချဉ်းကပ်ပြီး “အရှင်ဘုရား နောင်တော်ကြီး […]
Posted in: Books, ၀တ္တုတိုLeaveacommentMM Book City	 22/04/2018
အရမ်းကို ကောင်းလွန်းတဲ့ စာတိုလေး
တစ်နေ့ကို မိုင်တစ်ထောင်သွားနိုင်တဲ့ အာဇာနည်မြင်းပျိုလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်၊ သူ့ရဲ့အရည်အချင်းကိုဖော်ထုတ်ပြသဖို့ အခွင့်အရေးကိုစောင့်နေတယ်။ ကုန်သည်လာတယ်၊ပြောတယ်၊ ` မင်းငါနဲ့လိုက်နိုင်မလား´ မြင်းကခေါင်းခါပြီးပြောတယ်၊ `ငါက တစ်နေ့မိုင်တစ်ထောင်သွားနိုင်တဲ့ အာဇာနည်မြင်းကွ… ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ကုန်သည်နောက်လိုက်ပြီး ကုန်ထမ်းရမှာလဲ ? ´ စစ်သားလာတယ်၊ ပြောတယ်၊ ` မင်းငါနဲ့လိုက်နိုင်မလား´ မြင်းကခေါင်းခါပြီးပြောတယ်၊ `ငါက တစ်နေ့မိုင်တစ်ထောင်သွားနိုင်တဲ့ အာဇာနည်မြင်းကွ… ဘယ်လိုဖြစ်လို သာမာန်စစ်သားတစ်ယောက်နောက်လိုက်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ရမှာလဲကွ? ´ မုဆိုးလာတယ်၊ ပြောတယ်၊ ` မင်းငါနဲ့လိုက်နိုင်မလား´ မြင်းကခေါင်းခါပြီးပြောတယ်၊ `ငါက တစ်နေ့မိုင်တစ်ထောင်သွားနိုင်တဲ့ အာဇာနည်မြင်းကွ… ဘယ်လိုဖြစ်လို မုဆိုးနဲ့အတူတူ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုဒဏ် ခံရမှာလဲကွ? ´ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ကုန်ဆုံးသွားသည်၊ ဒီမြင်းတစ်ကောင် သူနဲ့တန်သည့်အလုပ်ရှာမတွေ့သေးချေ။ တစ်နေ့ ဘုရင်မင်းမြတ်အမိန့်ဖြင့် စစ်သူကြီးတစ်ယောက် အာဇာနည်မြင်းကိုလိုအပ်ကြောင်း နေရာအနှံ့ကြော်ငြာစာများကပ်ကာ လိုက်ရှာလေသည်၊ အာဇာနည်မြင်းက စစ်သူကြီးဆီသွားတွေ့ပြီး ပြောတယ်၊ […]
Posted in: ပုံပြင်, ၀တ္တုတိုLeaveacommentMM Book City	 18/04/2018